မိုးထဲရေထဲ ကျရင် အမေရိကန်ဟာ မြန်မာပြည်ကို တကယ်ရော ကူညီမှာလား? - Zet Star
မိုးထဲရေထဲ ကျရင် အမေရိကန်ဟာ မြန်မာပြည်ကို တကယ်ရော ကူညီမှာလား?
ဖွင့်ထားမယ့်တစ်လမ်း မြန်မာပြည်နဲ့ ဟာစီနာတို့ရဲ့တိုင်းပြည် အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ် အနောက်နိုင်ငံတွေအပေါ်ဘယ်လောက်မက်လုံး ပေးနိုင်သလဲ စွဲဆောင်နိုင်သလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ဖူးကြမှာပါ လေ့လာသူတွေဟာ fact sheets ​​တွေ country papers ​​တွေကို ကိုးကားကြတာထုံးစံဖြစ်ပါမယ် သေနတ်ဘယ်နှစ်လက် တင့်ကားဘယ်နှစ်စီး လေယာဥ်တွေစစ်သင်္ဘောတွေ ရေငုပ်သင်္ဘောတွေ GDP ​​တွေ အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေ population density တွေ နိုင်ငံတကာကြွေးမြီ ဘာညာစသည်ဖြင့်ချိန်ထိုးကြ စမွဲပါ ခုခေတ်ကြီးရဲ့အနေအထားအရလေ့လာရင် ကမ္ဘာမှာ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကျောထောက်နောက်ခံ ဘယ်လောက်ရသလဲ ဘယ်လောက်အထိ စိတ်ချယုံကြည်ရသလဲ ဆိုတာဟာ ခုနင်ကပြောတာတွေထက် အရေးပါနေတာကို ငြင်းလို့မရပါဘူး
တောင်အမေရိကမှာ Suriname တို့ Guyana တို့ဆိုတာအသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံလေးတွေပါ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ်တွေအတွင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပီယိုဟာ အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ် သတိပြုမိစရာတစ်ခုကတော့ အဲ့ဒိနိုင်ငံတွေထဲက Guyana ဟာ တရုပ်ရဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ နယ်နိမိတ်ဆက်စပ်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့နေပါတယ်
နိုင်ငံသေးငယ်ပေမယ့် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ စူပါပါဝါအမေရိကန်အတွက်အရေးပါနေတယ်ဆိုတာ ကို ပွန်ပီယိုရဲ့ခရီးစဥ်က မီးမောင်းထိုးပြပါတယ် ဗင်နီဇွဲလားမှာ တရုပ်ရဲ့ခြေရာလက်ရာတွေများနေပါတယ် အဲ့ဒိလက်တန်တွေကိုရိုက်ချိုးဖို့ နယ်နိမိတ်ဆက်စပ်နေတဲ့ နေရာတွေကို ကိုင်ထားဖို့ကလိုကိုလိုပါတယ် ဘေးတွေနောက်တွေကို ပိတ်ထားနိုင်ခဲ့ရင် အဝကထိုင်စောင့်ရုံပါပဲ့ “ဘေးတွေနောက်တွေကိုပိတ်ထားနိုင်ရင် အဝကစောင့်ရုံပါပဲ”
ကျွန်တော်တို့မြန်မာဟာ ဂုဏ်ယူရလောက်အောင် သယံဇာတ ဘာညာ ကမ်းရိုးတန်းကဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် ပြောနေကြပါတယ် တရုပ်ရဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ဟာမြန်မာပဲ ဒါ့ကြောင့်တရုပ်ကချုပ်ထားတာ ဒါကိုအမေရိကန်က အဖြစ်မခံဘူး ဘာညာပြောနေကြပါတယ် မှန်ပါတယ် တကယ်လည်းထွက်ပေါက်ပါ အရေးပါပါတယ် အမေရိကန်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအမြင်ကို သူတို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပွန်ပီယိုရဲ့ ခရီးစဥ်တွေ အကွက်တွေနဲ့ ပြန်လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ အီရန်ကို ဝိုင်းဖို့ အစ္စရေးကိုအသုံးချပါတယ် အစ္စရေးကနေတဆင့် အီရန်ကို ပင်လယ်ကွေ့မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားတဲ့ ဘာရိန်း ယူအေအီးတို့ကို ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီး အီရန်ကို ဟန့်လိုက်ပါတယ် အီရန်ရဲ့ ပြိုင်ဖက် ဆော်ဒီကို အမေရိကန်ဟာအိတ်ထဲထည့်ပြီးသားပါ အီရန်အတွက် ပင်လယ်ကွေ့ထွက်ပေါက်ကို ဆော်ဒီ ဘာရိန်း ယူအေအီးတို့နဲ့ ချုပ်လိုက်ပါတယ် ပွန်ပီယိုရဲ့ဥရောပခရီးစဥ်အပြီး ဥရောပမှာ ကြီး၃ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ E3 နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK ဂျာမဏီ ပြင်သစ်တို့ဟာ တရုပ်ရဲ့ တောင်တရုပ်ပင်လယ်က ပိုင်ဆိုင်မှု ကြေညာချက်တွေကို ပယ်ချလိုက်ပါပြီ
တောင်အမေရိကမှာ တရုပ်ရဲ့တပည့် ဗင်နီဇွဲလားကိုချုပ်ဖို့ ပွန်ပီယိုဟာ စည်းရုံးရေးခရီးသွားခဲ့ပါပြီ မကြာခင်မှာပဲ ပွန်ပီယိုဟာ တူရကီနဲ့တင်းမာမှုဖြစ်နေတဲ့ ဂရိနိုင်ငံကိုအားပေးဖို့ သွားဦးမယ်ဆိုတာကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ တူရကီဟာ တရုပ်နဲ့ပြေးကပ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေးဟာ လေသံပြောင်းပြီး တောင်တရုပ်ပင်လယ်က တရုပ်နဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကို အလျော့မပေးဘူးလို့ပြောလာပါပြီ ဖိလစ်ပိုင်မှာ US စစ်စခန်းရှိပါတယ်
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးဟာ အာဆီယန်ငါးနိုင်ငံ ( ကမ်ဘောဒီးယား လော မြန်မာ ထိုင်းဗီယက်နမ်) တို့နဲ့ မဲခေါင်အမေရိကန် ပါတနာ ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ် စတင်မတည်လှူဒါန်းငွေ ဒေါ်လာသန်း၁၅၀ ကျော်နဲ့စတင်လိုက်ခဲ့ပါတယ် အဲ့သည်နိုင်ငံအားလုံးထဲက လောမြန်မာဗီယက်နမ်တို့ဟာ တရုပ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ဆက်စပ်နေပါတယ် အမေရိကန်တို့ဟာ သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တရုပ်ကို ဒီလို စနစ်ကျကျ ဝိုင်းပါတ်ထားပြီးပါပြီ
တရုပ်တို့အတွက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဆီကို ထွက်ပေါက်၂ခုရှိပါတယ် မလက္ကာရေလက်ကြားကိုပါထည့်တွက်ရင်သုံးခုပါ သို့သော် ရေလက်ကြားအထွက်နေရာဟာ chokepoint ဖြစ်နေတော့ အရေးအကြောင်းမှာ အသုံးပြုလို့မရနိုင်ပါဘူး ဒါ့ကြောင့်ပယ်လိုက်ရင် ၂ခုကျန်ပါတယ် အဲ့ဒိနှစ်ခုဟာ ပါကစ္စတန်ရဲ့Gwadar port နဲ့ ကျောက်ဖြူပါပဲ အဲ့သည်မှာ ဂွာဒါဟာ လမ်းကြောင်းရှည်လျားပြီး ပြဿနာရှိနေတဲ့ ရှင်းကျန်းပြည်နယ်က ဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ အသင့်တင့်ဆုံးဟာ ကျောက်ဖြူဖြစ်နေတယ် လို့သုံးသပ်ကြပါတယ် မှန်ပါတယ် ယူနန်ပြည်နယ်ကနေ အချိန်တိုအတွင်း ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရစေမှာက ကျောက်ဖြူပါပဲ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာပြည်ဟာ တရုပ်အတွက် လက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့ မဟာဗျူဟာကျနေတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ် ကြည့်ရအောင်ပါ
အမေရိကန်တို့ဟာ တောင်တရုပ်ပင်လယ်မှာ ဆိုင်ထားပါတယ် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွက် အိန္ဒိယနဲ့စစ်ရေး လေ့ကျင့်ပြီးသားအပြင် QUAD ဆိုတာကိုဖွဲ့ထားပါတယ် အိန္ဒိယပိုင်တဲ့ အန်ဒမန်ကျွန်းမှာ ANC စစ်ဌာနချုပ်စခန်းကြီးရှိပါတယ် ရန်ကုန်နဲ့မဝေးပါဘူး ​​ရေမိုင်ပေါင်း ၃၆၅.၅ မိုင်ပဲရှိပါတယ် လေယာဥ်တင်သင်္ဘောအုပ်စုဟာ တစ်နာရီ ၄၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ရွှေ့လာရင် ၈နာရီခရီးပဲရှိပါတယ် အမေရိကန်လေယာဥ်တင်သင်္ဘောကြီးတစ်စီးပဲပါတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဆိုတာဟာ အဲ့ဒိ စစ်စခန်းဌာနချုပ်ထက်ကြီးမားတဲ့ တိုက်စွမ်းအားရှိပါတယ်
အဲ့ဒိလိုအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးထားပြီးသား အမေရိကန်ဟာ အရေးအကြောင်းဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို Guyana တို့ Suriname တို့လိုလာညှိမယ် အရေးအကြောင်းမှာ မြန်မာဘက်ကပါဖို့များ လိမ့်မယ် ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ် သူတို့ဟာ တစ်နေရာထဲစကားတစ်ခွန်းထဲမပြတ်တဲ့ အစိုးရရှိတဲ့နေရာကိုလာလိုဟန်မရှိပါဘူး သူများဝင်ထားပြီးသား စျေးကြီးမယ့် ရန်သူများမယ့်နေရာကို ရှောင်မှာပါ ရန်သူဆိုတာဟာ ပြည်တွင်းမှာကိုပရိုဆီလက်နက်ကိုင်ထားနိုင်ကြအဖွဲ့တွေ အများကြီးနဲ့ စစ်မျက်နှာများနေတာကို ဘယ်သူမဆိုရှောင်မှာပါ သတင်းလုံခြုံမှုအတွက် စိတ်မချရတဲ့နေရာကို ရှောင်ပါလိမ့်မယ် ( နေရာတကာမှာပြန့်နှံ့နေပြီးသားလို့ယုံကြည်ရတဲ့ လျို့ဝှက်ရောပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရော ရောက်နေပြီးသား ပဥ္စမံတပ်သားတွေ ဖြန့်ထားပြီးသား နိုင်ငံကို စိတ်ချလက်ချယုံကြည်မှာမဟုတ်တာသေချာပါတယ် ) ခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်မပေးနိုင်သရွေ့လာမှာမဟုတ်ပါဘူး
ဟာစီနာတို့ဆီကိုကြည့်ရအောင် လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူမရှိသလောက်ပါ တဖွဲ့ထဲနဲ့ စကားပြီးပါတယ် ကုလသမဂ္ဂနဲ့အငှားလိုက်နေကျ တပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ် မြှုပ်နှံထားတဲ့ဆဲလ်တွေ နည်းပါးမယ် တရုပ်နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်မနေဘူး ဘင်းဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်တဲ့ စိန့်မာတင်ကျွန်း(အုန်းကျွန်း) နဲ့ ကျောက်ဖြူဟာ ၁၈၅ ကီလိုမီတာ ရေမိုင်၁၀၀ သာသာပဲရှိပါတယ် တရုပ်ဟာ အိန္ဒိယ မြန်မာ လာအို ဗီယက်နမ်တို့နဲ့ နယ်နိမိတ်ထွက်ပေါက်ရှိနေတာမှာ မြန်မာတစ်ပေါက်ဖွင့်ပေးထားတာက ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလိမ့်မယ် မြန်မာကို အနောက်က ဘကုန်း အရှေ့က ယပက်လက်နဲ့ ထိန်းထားပြီးသားဖြစ်သွားရင် အဝကစောင့်ရုံသာပါပဲ ထိုင်းက အမေရိကန်ရဲ့ အရုပ်ပါပဲ “ဘေးတွေနောက်တွေကိုပိတ်ထားနိုင်ရင် အဝကစောင့်ရုံပါပဲ”
အရေးအကြောင်းမှာ မြန်မာဘက်ကိုပါလာပါ့မလား ? မြန်မာဟာ သူတို့(အမေရိကန်)အတွက် အတော်အရေးပါတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား ? မြန်မာကိုအမေရိကန်က လက်နက်တွေရောင်းပေးမယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးကြပါသလား ? အမေရိကန်ကဘကုန်းကိုရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်မှီလက်နက်တွေကဘယ်သူ့ကိုတိုက်ဖို့ပါလဲ ? ကျွန်တော်တို့မှာမက်လောက်စရာဘာမှသိပ်မရှိပါဘူး ဆိုတာသိစေချင်လို့ပါ မညီညွတ်သရွေ့ တရုပ်ကောက်စားဖို့ပဲဖြစ်နေရင်းကနေ အလွန်ဆုံး ပရိုဆီဖီးလ် ဖြစ်သွားရုံပါပဲ စစ်ကြီးသာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ Proxy Field လောက်တော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
← ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပါက အထူးဂရုစိုက်ရမယ့်သူများ (ရောဂါပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်)
စင်ကာပူရဲ့ အတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေး နည်းလမ်းများ (အမိန့်တွေ အများကြီး မထုတ်ပါဘူးတဲ့) →